Dagaal Khasaare gaystay oo maleeshiyo beeleed ku dhex maray Ceel-Afweyn.
Inta la xaqiijiyay lix ruux ayaa ku dhintay afar kalena waa ku dhaawacmeen dagaal gelinkii dambe ee shalay laba malayshiya-beeleed ku dhexmaray nawaaxiga degmada Ceel Afweyn ee galbeedka gobolka Sanaag.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay degaanka Duud-Carraale oo hoosyimaada degmada Ceel Afwe ee gobolka Sanaag kadib markii ay mid kamid ah labada malayshiya-beeleed ay weerartay halkaasi oo ay ku sugnaayeen malayshiyaadka kale.
Dagaalka oo mudda saacado ah socday ayaa sida la sheegayo istaagay wax yar ka hor salaaddii makhrib ee shalay waxaana labada malayshiya kala joogan meela isu muuqda sida laga soo xigtay dadka degaanka.
Ciidamo ka tirsan Somaliland ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay ku baxeen degaanka lagu dagaallamay si ay u kala dhex galaan labada malayshiyaad oo mar kale isu hub uruursanaya balse weli laguma guulaysan in la kala qaado.
Odayaasha dhanka ayaa dhankooda ku howlan daminta xiisa waxa ayna sheegeen dagaalka uusan xal ahey shacabka Degmada Ceel-Afweyn,iga oo ku baaqay in cid kasta oo gacan ka gaysa karta ay joojiso dagaalka Ceel-Afweyn.
Colaadda u dhexaysa labada beelood ee halkaas wada-dega ayaa soo noq-noqotay sannadihii u dambeeyay waxaana marar kala duwan buray heshiisyo hore loo dhex dhigay labadaan beelood.